2 Korinte 5:17 uthi: "Ngakho-ke uma umuntu ekuKristu, uyisidalwa esisha; izinto kudlulile; bheka, zonke izinto zaba zintsha. "
Njalo ngonyaka omusha Rolls nxazonke, abantu baqala ukucabanga ngezinto bangashintsha ezimpilweni zabo. Abanye abantu bathi uzohluleka isisindo bese uqale ukuwadla okunempilo. Abanye bathi ukuya emuva ekolishi noma uphume ezikweletini. Abanye bathi bazophinde ukubhala incwadi noma ukuziqalela amabhizinisi abo. Futhi abanye abazenza ukuthola ihlelwe noma ukuchitha isikhathi esengeziwe nomkhaya nabangane.
Ukuqala konyaka omusha isikhathi omkhulu ukwenza ushintsho ekuphileni kwakho ngempela. Ngikholelwa ukuthi uNkulunkulu usipha izimpawu isikhathi njengendlela ngathi ukuyeka, bheka emuva ngezimpilo zethu, futhi ukubona izinto singakwazi ukushintsha ikusasa. Nokho, abantu abaningi bagxila ekwenzeni kwangaphandle kuphela izinguquko - izinguquko ezokwenza ngcono indlela abukeka, ngcono izinga labo lokuphila, noma ukuthuthukisa indlela abanye babone nabo. Ngikholelwa ukuthi ushintsho umhlabeleli ungenza ushintsho kusuka ngaphakathi out - ukushintsha kwenhliziyo, umoya, futhi ingqondo. Ngamanye amazwi, ushintsho okuletha omusha kuwe ngonyaka omusha. Ngokuba alikho kungaba ngempela Year New uma kungekho esisha for the Year New.
Ngakho, namuhla, ngifuna ukwabelana nawe evela eZwini likaNkulunkulu kanjani ungaba entsha nawe njengoba silibangise singene onyakeni omusha. In Second Korinte isahluko 5, uPawulu ebhalela amakholwa aseKorinte cishe okushiwo ukufa kukaKristu. Ugcizelela ukuthi uKristu wafela "bonke abantu", ukuze umuntu bangaba nokuphila entsha ngoJesu Kristu. Ngenxa ukufa kukaKristu, insindiso wawunganikezwanga amaJuda, kodwa kwavulwa wonke umuntu. Lokhu ezinhle kithi namuhla ngoba lisitshela ukuthi umuntu ukuthi ungaba ushintsho olukhulu ekuphileni kwabo ngamandla iVangeli leNkosi uJesu Kristu.
Abantu abaningi baye bathola impilo entsha kuKristu. Abanye abantu abadumile oye wezwa, ezifana: umculi Carrie Underwood, Super Bowl-ngokuwina umqeqeshi football Tony ezinjengendle, NBA player Kevin Durant, umlobi izindaba umhlaziyi uKirsten Powers, umlingisi Blair Underwood, athlete Olympic Brady Ellison, Olympic gold medalist Sanya Richards-Ross, futhi PGA igalofu tour iqhawe Webb Simpson, sonke wawuthi umuntu owenza umehluko ezinkulu ekuphileni kwabo nguJesu Kristu.
Blair Underwood wathi: "Nginguye a Christian. Ngikholelwa kuNkulunkulu has a plan. Ngikholwa yena ngeke asishiye ilenga. Njengoba umuntu, anginakho zonke izimpendulo. Ukukwazi ukuvula izindaba phezu to a imisebenzi amandla ephakeme kimi. "
Tony ezinjengendle wathi: "Wena angeke zibengcono kuphi kwezemidlalo noma ukuphila uze kubona ukuthi iqiniso ivangeli likaJesu Kristu. Ungase ube athlete professional noma ube nodumo nice izimoto kanye nezindlu nice futhi imali eningi, kodwa lokho uzothola ukuthi zonke Izinto uhamba pretty masinyane. Kufanele siqonde ukuthi uKristu wafela izono zethu, futhi Wafa hhayi nje ukuba uMsindisi wethu, kodwa ukuze uNkulunkulu abe sigxilise ukuphila kwethu. "
UKirsten Powers wathi: "Angazi ngempela sengathi kwadingeka yimuphi nesibindi lapho ngiba umKristu; Ngavele ngayeka in bengingekho nesibindi. I ayinazo choice. Ngaqhubeka ngizama anikholwa kodwa mina nje akakwazanga ukugwema ukwamukela uKristu. "
NBA player Kevin Durant sathi: "Ngiyakholwa uthando uNkulunkulu analo ngami, ukufa kukaJesu komhlatshelo izono zami, futhi ngomusa waKhe, hhayi imisebenzi yami okuhle, kukhona okusindisayo kimi. Ozithobayo mina futhi ungenza ngibe bamkonze. I ayakholwa Heaven ngigcinelwe nokuthi the best okuzayo. I Ungeze tattoo elula esihlakaleni yami ethi, bukhoma phakade. IZwi likaNkulunkulu lithi lokho lapho thina Sonke ephethwe. Futhi mina Wanna ukuqala abaphila leyo nombono phakade konke engikwenzayo manje. "
Grammy imiklomelo umculi Carrie Underwood wathi: "songs My ngezinye izikhathi sigxile kuNkulunkulu, uJesu nokholo. Njalo ngoLwesithathu, mina nomyeni wami abe iqembu lokutadisha nabangane bethu. I bengasonti. Sizama ukuba uchithe isikhathi in the morning ukuthandaza. "
Olympic gold medalist Sanya Richards-Ross wathi: "Kukhona amavesi amaningi okunenjongo eBhayibhelini, kodwa lowo ngithi mina ngokuvamile kuba, 'Angikwazi ukwenza konke ngoKristu oqinisa mina!' Lokho intandokazi yami ngoba track , ngokuvamile ngizama ukwenza izinto eziye kuyaqabukela yenziwe ngaphambili. Ngiyazi ukuthi kungcono uNkulunkulu kuphela kunginika amandla afeze lezi zinto. "
Sasingaxoxa izibonelo more. Kodwa ngifuna ukuba nazi ukuthi ungakwazi ukujoyina ukuthandwa yalezi nezinye abantu abaningi ngokuvumela uJesu Kristu ukuba enze entsha kuwe ngonyaka omusha kanye ukuphila kwakho laphaya. Shintsho zingaba kanjani?
1. Okokuqala, ukuba abe entsha kuwe ngonyaka omusha, kufanele ube "kuKristu." Ivesi 17 luqala, "Ngakho-ke uma umuntu ekuKristu ..." Igama lesiGreki elisho "in" kusho ukuba a 'isikhundla fixed' noma 'bahlale ngaphakathi emisiwe'. Kusho ukuthini ukuba kuKristu? Ukuba kuKristu isho ukuma of ikholwa ngemva yena uye wasamukela uJesu Kristu njengomsindisi wabo. Ngaphandle wena kuKristu, ngeke yokuphila entsha noma a sengqondo esisha.
The term 'kuKristu' noma 'kuye' lisetshenziswe izikhathi eziningana eTestamenteni Elisha ukuchaza isikhundla kanye nezinzuzo ukuthi ikholwa has. Isaziso Efesu 1: 7. Leli vesi lisitshela ukuthi 'In kuye sinawo ukuhlengwa ngegazi lakhe, ukuthethelelwa kwezono ngokwengcebo yomusa wakhe ...' Siyabona lapha ukuthi uma kuKristu, izono zakho bahlanza ngaphansi igazi lewundlu. By ukufa kukaKristu, futhi ngenxa yomusa kaNkulunkulu, wena bahlengwa noma lokukhululwa esonweni isijeziso wesono Hell.
Okwesibili, phawula Efesu 1: 3. Leli vesi lithi uNkulunkulu "ubusisile sonke izibusiso ezingokomoya ezindaweni zasezulwini kuKristu ..." Uma kuKristu, wena ube izibusiso ezingokomoya ukuthi obungeke ukuthole ngenye indlela. Sicela uphawule lapha ukuthi lokhu alikhulumi uzobabusisa ngengcebo. Ukuba Kristu akusho kuyomelwe indlu enkulu noma imoto ebiza. Kodwa kuyomelwe izibusiso ezingokomoya ezifana yokuthula okudlula ukuqonda konke, injabulo engachazeki, ukuzethemba phakathi izivunguvungu zempilo, futhi ithemba ezulwini phakathi yithemba. Mathewu Henry wathi: "izibusiso Engokomoya wasezulwini izibusiso umhlabeleli; esingavika ngeke ujabule. "
Manje, phawula eyabaseKolose 2:10: "Futhi nina kuye ngokuphelele, okuyinto oyinhloko yabo bonke ubukhulu namandla." Kusho ukuthini ukuba ephelele "kuKristu"? Igama lesiGreki elisho "ugcwalise" kusho 'igcwale' noma 'agcwalisa'. Ngamanye amazwi, uma kukhona kuKristu, wena konke okudingayo ukuze siphile ukuphila kobuKristu. You konke okudingayo ukuze kubhekwe ulungile emehlweni kaNkulunkulu. You konke okudingayo ukuze kudlule lokhu kuphila emhlabeni ekuphileni okulandelayo eZulwini.
Ngakho, siyabona ukuthi ukuba 'kuKristu "kusho ukuthi zonke izono zethu bahlanza ngaphansi igazi futhi thina ekubeni amandla esono kanye sisono. Ukuba kuKristu kusho ukuthi siye wathola izibusiso ezingokomoya ngenxa kaJesu Kristu; futhi nokuba kuKristu kusho ukuthi thina abangantuli lutho ukuthi siphathelene insindiso yethu nokuphila.
Ukuba "kuKristu" isinyathelo sokuqala sokuba entsha kuwe ngonyaka omusha.
2. Ukuze abe entsha kuwe ngonyaka omusha, kufanele uqaphele ukuthi wena "isidalwa esisha." Okwesibili Korinte 5:17 uthi: "Ngakho-ke uma umuntu ekuKristu, uyisidalwa esisha ..." Baningi amaKristu abahlala ezilusizi, abakhiqizi futhi wanqoba izimpilo ngoba nje abaqapheli futhi bamukele iqiniso lokuthi ngoba kuKristu, ukuthi ayizidalwa ezintsha futhi sekuyisikhathi sokuba ukuba silahle izindlela ezindala futhi baqala ukuhlala ngokusho ukuma kwabo eseyingane kaNkulunkulu.
Cabanga insizwa bengenamakhaya, singcolile, zingcolile, futhi abampofu. Yena uhamba emigwaqweni encenga ngezinhlamvu nje ukuthola bite ukuba adle zonke izinsuku. Ngelinye ilanga, umuntu uza emfuna njengoba ehlezi phezu inxiba ekhoneni lomgwaqo. Le ndoda umtshela ukuthi empeleni indodana umnikazi ibhizinisi abacebile a nokuthi uyise ufuna ukuba eze ekhaya, uthole ukuphila kwakhe track, futhi uthole imfundo. Utshela insizwa ukuthi kukhona zazivumela ngaye at mansion uyise nokuthi konke akudingayo - ukudla, okokwembatha nemali - kwakuyoba zinakekelwe kusukela ngaleso sikhathi. Manje, ake ucabange ukube nsizwa abampofu yenqaba ukuthatha uyise up ngalolo hlobo of sipho futhi wanquma ukuhlala isinxibi engenakhaya.
Yebo ukuthi iwubuphukuphuku. Nokho, yilokho amaKristu amaningi enze ngamunye ngosuku. Abazi baphile ngokomkhuba isimo sabo njengoba abalandeli bakaKristu. Neil T. Anderson wabhala encwadini yakhe, The izigqila Breaker, ukuthi uSathane uyakwazi "ukuvimba siphumelela umKristu uma angakhohlisa wena akholelwe ukuthi wena lutho kodwa umkhiqizo esidlule wakho - kuncike isono, uthambekela ukwehluleka, futhi zilawulwe imikhuba yakho. "uyaqhubeka athi:" uSathane ngeke benze lutho mayelana isikhundla sakho kuKristu, kodwa uma angakhohlisa wena akholelwe ukuthi umBhalo uthi akulona iqiniso, uyophila sengathi akulona iqiniso . "
Uma Abaqapheli futhi bamukele iqiniso ukuthi isidalwa esisha kuKristu, khona-ke anisoze uphile njengoba noKristu wayehlose ukuba nihlale. Uyothola i enamandla, ukuphila onqobayo ukuthi ungaba ngingenalo. "Unyaka omusha 'Your siyoba esifanayo njengoba yakho" owodwa ubudala. "Kungakhathaliseki ukuthi unethemba nethemba Uzizwa Year New, futhi kungakhathaliseki ukuthi singakanani unqume ukwenza unyaka omusha ezahlukene, uDeveli ngeke kukukhumbuza zonke ukwehluleka kwakho aba nayo ngonyaka odlule futhi iminyaka ngaphambi. Ngeke umthwalo wena izono zakho kanye amaphutha at the ukuqala the Year New futhi uma ukwamukela amanga akhe futhi nikholwa ukuthi lelo ngendlela oyiyo, khona-ke ngizoya ngokusebenzisa omunye unyaka ngokuvumelana eligcwele yakho njengoba ngumntwana kaNkulunkulu.
Ngilapha bakutshele ukuthi akudingeki ukuba ube ebugqilini besono. Akudingeki ukuba zidlule omunye unyaka kucabanga okuyiphutha futhi izono ezifanayo. Ungaba entsha kuwe ngonyaka omusha uma ubona ukuma kwakho eyisidalwa esisha kuKristu.
3. Ukuze sibe entsha kuwe ngonyaka omusha, kufanele yini lahlani konke 2 Korinte 5:17 ithi "uma umuntu ekuKristu, uyisidalwa esisha" izinto ezindala. ": Izinto kudlulile; bheka, zonke izinto zaba zintsha. "Bathi ncazelo ezingqondweni ukwenza izinto ezifanayo ngokuphindaphindiwe futhi ulindele imiphumela ehlukile. Lokho kuyiqiniso. Futhi uma ufuna imiphumela ezahlukene ngonyaka omusha, kufanele ayeke ukwenza izinto ezifanayo elidala ngokuphindaphindiwe. IBhayibheli lithi uma kuKristu, futhi uma isidalwa esisha, bese izinto ezindala kufanele 'sebudlulile. "Yiziphi izinto ezindala ekuphileni kwakho okuzodingeka ukuba silahle onyakeni omusha?
Ingabe wena amanga kulo nyaka odlule? Ingabe wena ukudebeselela umthandazo futhi ufunda izwi likaNkulunkulu kulo nyaka odlule? Ingabe wena abakopelayo futhi connive ukuba indlela yakho kulo nyaka odlule? Bafazi, ingabe amazwi angabonisi inhlonipho umyeni wakho kulo nyaka odlule? Madoda, akazange yini uhluleka thandani omkenu njengoba kufanele kulo nyaka odlule? Izingane, akazange ungabalaleli abazali bakho kulo nyaka odlule? Whatever you wenza ngonyaka odlule ukuthi waba imiphumela emibi, udinga ukuba silahle onyakeni omusha.
Phawula leli vesi kweyabaseKolose isahluko 3: "kepha kalokhu nani manilahle konke lokho; intukuthelo, ulaka, nokuthukuthela, nobubi, nokuhlambalaza, nokukhuluma amahlazo aphuma emlonyeni wenu. Ningaqambelani amanga omunye komunye, ebona ukuthi nikhumule umuntu omdala kanye nezenzo zakhe. "
Uma ufuna ukwenza unyaka omusha ngonyaka mkhulu phakathi kwenu kumelwe lahlani konke izinto ezindala ukuthi wenza ngonyaka odlule futhi eminyakeni edlule ukuthi wenza lowo nyaka unyaka omubi. Nikeza esidlule yakho kuNkulunkulu ngoJesu Kristu futhi Yena abazonakekela wona wena.
Ngivumele kukukhuthaze ukuba nje kuphela silahle izono nokungaphumeleli ngonyaka odlule, kodwa ukufunda bese uyakhohlwa ngazo. Ngikholelwa ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi amagoli namaphrojekthi ezimangalisayo angakaze igcwaliswe ngenxa ukungabatholi abantu ukukhohlwa esidlule kunokuba yisiphi esinye isizathu. Ngeke afeze okuningi lutho ngonyaka omusha uma uvumela ingqondo yakho ukuba sihlale sicabanga ngezono, izinkinga, izinkinga, futhi ukwehluleka kwakho esidlule.
In Isaya 43:18, uNkulunkulu wayala abantwana bakwa-Israyeli ukukhohlwa yizinto zesikhathi esidlule. Wathi: "Anikhumbuli yini izinto zangaphambili, futhi ningamniki sicabangele izinto zakudala." Empeleni, uNkulunkulu ngokwakhe akakhumbuli izono zethu. Emavesini ambalwa kamuva kuso leso sahluko uthi: "Mina, yebo mina, nginguye blotteth izeqo zenu ngenxa yami, futhi ngeke esazikhumbula izono zakho." Ngakho, uma uNkulunkulu engathathi ukukhumbula izono zethu, ungapheli ucabanga kungcono ukuba senze okufanayo?
Dennis DeHaan wabhala inkondlo kancane eliphuma like lokhu:
Bheka hhayi emuva on izolo
Ngakho egcwele ukwehluleka nokuzisola;
Bheka kusengaphambili futhi bafune embi kaNkulunkulu
Konke isono wavuma kumele ukhohlwe.
Umngani wami, silahle izono ubudala nokungaphumeleli esikhathini esidlule. Funda kubo bese ukhohlwa ngazo ukuze kulo nyaka ozayo kungaba umuntu omkhulu, ngoba ngeke kube khona unyaka omusha kuwe uma kungekho entsha kuwe ngonyaka omusha.
Njengoba sivala namuhla, ngifuna ukukhuluma labo abaye never wamukela uJesu Kristu njengeNkosi nomsindisi wakho. Ngamanye amazwi, awusiye "kuKristu" manje. Ngifuna ukukubonisa indlela ungathola kuKristu. Lena indlela kuphela ungakwazi ukushintsha ukuphila kwakho kusukela ngaphakathi out.
Abantu abaningi olukhulu esedlule nawamanje ngikhulumile uJesu Kristu kanye nomthelela waba ekuphileni kwabo.
The wezempi omkhulu French kanye nomholi wezombusazwe Napoleon Bonaparte wathi: "Ngimangazwa ukuthi kanti amaphupho ambitious of ngokwami, kwakufanele uKhesari, futhi Alexander sachitha esigayegayeni emoyeni elincanyana, a ongumlimi aseJudiya - Jesus - kufanele akwazi yokwelula izandla zakhe ngaphesheya eminyaka futhi ukulawula isiphetho of abantu nezizwe. "umngane othandekayo, ungamenza uJesu Kristu ube ophethe ikusasa lakho kanye.
Basketball Julius omkhulu "Dr. J "Erving wathi:" Inhloso yokuphila itholakala ngokusebenzisa kokuba uKristu empilweni yakho, nokuqonda lokho plan yaKhe, futhi ngemva kwalokho plan. "
Mengameli wangaphambilini George W. Bush wathi: "Kristu sefilosofi kunabo: wayishintsha inhliziyo yami."
Isazi semfundiso yenkolo futhi mlando uPhilip Schaff wathi: "Ngaphandle uKristu, ukuphila kuba njengoba twilight nge kusengaphambili dark night; noKristu, kuba ukuntwela kokusa ne ukukhanya nokufudumala of day full kusengaphambili. "
Umlobi omkhulu yaseScotland uRobert Louis Stevenson wathi: "Lapho uKristu efika empilweni yami, mina Kwathi like a umkhumbi kahle-iphathwe."
The British Umbhali kanye nabezindaba ubuntu Malcolm Muggeridge wathi: "Ngingasho ukuthi angikaze wayazi ukuthi injabulo kwakunjani kuze Nganikela ukuphishekela injabulo, noma wawunakekelwa ukuba aphile kuze ngakhetha afe. Ukuze lezi zinto ezatholakala ezimbili I am bencike kuJesu. "
NFL quarterback Sam Bradford wathi: "Angazi ngempela ukubona isizathu ongeke uthande ukuba nobuhlobo noJesu Kristu. I mean, hhayi nje engu sibunjwa esikhulu womuntu ukuze owake waphila emhlabeni, Muhle konke engifuna ukuba balwele ukuba. Muhle konke umuntu kufanele ufise ukuba balwele ukuba. "
Umvangeli World-edumile Luis Palau wathi: "Enye ukuhlangana noJesu Kristu kwanele ukushintsha kuwe, kweso, kuze kube phakade."
UJesu Kristu ufuna ukushintsha nawe namuhla. Ufuna ube umuntu omusha ngaphakathi out. UNkulunkulu wathi ku Hezekeli 36:26: A "inhliziyo entsha futhi ngeke ngizokunika, futhi umoya omusha ngeke ngibeke ngaphakathi kini: Mina uyosusa inhliziyo yetshe enyameni yakho, futhi ngiyokunika inhliziyo yenyama . "
UNkulunkulu ufuna ukuba alethe lolu hlobo ushintsho ekuphileni kwakho. Yingakho wathumela iNdodana Yakhe uJesu Kristu ukuze sikwazi basindiswe esonweni isijeziso sesono. IBhayibheli lithi John 3:16: "Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela ngeNdodana yakhe ezelwe yodwa kuphela, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade."
Ake ngikubonise indlela ungakwazi ukwamukela uJesu Kristu njengoMsindisi wakho njengoba namuhla.
Okokuqala, kufanele uqonde ukuthi uyisoni, njengoba nje nami ngingeyona, nokuthi siyephulile imithetho kaNku. IBhayibheli lithi kwabaseRoma 3:23: "Ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu." Sicela baqonde ukuthi ngenxa yezono zakho, kufanele uthole isijeziso somlilo waphakade esihogweni. Roma 6:23 uthi "inkokhelo yesono ingukufa ... Lokhu kokubili ukufa ngokomzimba ethuneni nokufa ngokomoya okuphakade echibini lomlilo.
Ungakugwema kanjani basindiswe lokhu kufa? Roma 10: 9,13 uthi: "Uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyiNkosi, ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa ... Ngokuba yilowo nalowo nibize igama leNkosi uyakusindiswa. "
Uma ukholelwa ukuthi uJesu Kristu wafa esiphambanweni ngenxa yezono zakho, wangcwatshwa, wavuka kwabafileyo, futhi ufuna ukuba simethembe insindiso yakho namuhla, sicela athandaze nami lo mthandazo esilula: Holy Father uNkulunkulu, ngiyabona ukuthi ngiyisoni nokuthi ngenzile ezinye izinto ezimbi ekuphileni kwami. Mina nawe siyephulile imithetho yakho. Ngokuba uJesu Kristu ngenxa, Ngiyaxolisa ngezono zami. I manje kholwa yonke inhliziyo yami ukuthi uJesu Kristu wafela mina, wangcwatshwa, wavuka futhi. Nkosi Jesu, sicela angene enhliziyweni yami bese ugcine umphefumulo wami futhi bashintshe ukuphila kwami namuhla. Amen.
Uma nje wayemethemba uJesu Kristu njengoMsindisi wakho njengoba, futhi wathandaza lo mthandazo futhi waceba kusuka enhliziyweni yakho, ngimemezela kini esekelwe phezu iZwi likaNkulunkulu, usuke manje usindiswe esihogweni wena endleleni yakho ezulwini. Siyakwamukela umndeni kaNkulunkulu futhi ukuhalalisela ekwenzeni into ebaluleke kakhulu ekuphileni futhi uthola uJesu Kristu njenge Nkosi noMsindisi wakho. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ukuze akusize ukhule ekukholweni kwakho ezintsha kuKristu, iya Gospel Light Society.com nokufunda "Yini To Do You Emva ukungena ngomnyango". UJesu Kristu wathi ku John 10: 9, "Mina ngiyisango;. Ngami uma umuntu engena, uyakusindiswa, futhi iyoqhubela aphume, afumane idlelo"
UNkulunkulu uyakuthanda! Siyakuthanda! Kwangathi uNkulunkulu anganibusisa, futhi ube omkhulu New Year!